နိုင်ဂျာနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 16°N 8°E﻿ / ﻿16°N 8°E﻿ / 16; 8
နိုင်ဂျာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ နိုင်ဂျာသမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အနောက်အာဖရိကတွင် ရှိသော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ နိုင်ဂျာမြစ်ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ထားသည်။ တောင်ဘက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ နှင့် ဘီနင်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ နှင့် မာလီနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ နှင့် လစ်ဗျားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ချဒ်နိုင်ငံ တို့ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ နိုင်ဂျာနိုင်ငံသည် ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၁,၂၇၀,၀၀၀ ရှိသဖြင့် အနောက်အာဖရိကတွင် အကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော မြေမှာ ဆာဟာရ သဲကန္တာရ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၁၅ သန်းခန့်မှာ တောင်ဘက်စွန်းပိုင်း နှင့် အနောက်ပိုင်းတွင်သာ အများစု နေထိုင်ကြသည်။ မြို့တော်မှာ နီယာမေမြို့ ဖြစ်သည်။
République du Niger (ပြင်သစ်)
"Fraternité, Travail, Progrès" (ပြင်သစ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: La Nigérienne
နိုင်ဂျာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
၂၁.၂% Zarma & Songhay
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၃ ရက်
၁,၂၆၇,၀၀၀ km² (၄၈၉,၆၇၈ sq mi) (အဆင့်: ၂၁)
၂၄,၁၁၂,၇၅၃ (အဆင့် - ၅၇)
၁၂.၁/km2 (၃၁.၃/sq mi)
$၂၃.၄၇၅ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၄၀)
$၁,၂၁၃ (အဆင့် - ၁၈၃)
$၉.၈၆၉ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၃၆)
$၅၁၀ (အဆင့် - ၁၇၉)
အလယ် · ၇၀
နိမ့် · ၁၈၉
↑ Nigerien – definition of Nigerien in English from the Oxford Dictionaries။
↑ Report for Selected Country Groups and Subjects (PPP valuation of country GDP)။ IMF။
↑ World Economic Outlook Database. Report for Selected Countries and Subjects။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (17 April 2018)။
↑ World Economic Outlook Database, April 2018 Archived 26 April 2018 at the Wayback Machine., အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့. Accessed on 17 April 2018.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ဂျာနိုင်ငံ&oldid=709925" မှ ရယူရန်
၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။